Home » Akụkọ onyinye njem » Airlinesgbọ elu ụgbọ elu maka America na-ekwupụta ndị natara Nri na Bolts 2021
Nuts na Bolts Award na-amata ndị gosipụtara ọrụ pụtara ìhè na rụzuru na injinia ma ọ bụ ndozi mpaghara n'ime ụlọ ọrụ ụgbọelu azụmahịa
E nyere 2021 A4A Injinia, Ndozi na Materiel Council (EMMC) Mkpụrụ na Mkpụrụ Award
A na-enye onyinye n'oge Mgbakọ America Izu Izu Network nke MRO America
Onye njikwa FedEx nke nnabata / FAA na Boeing Director nke Injinịa maka Nkwado Ndị Ahịa bụ ndị nnata onyinye.
Gbọ elu maka America (A4A), otu ụlọ ọrụ azụmaahịa nke ndị isi ụgbọ elu US, ekwuputala 55th kwa afọ A4A Engineering, Mmezi na Materiel Council (EMMC) Mkpụrụ Mkpụrụ na Mkpọchi to FedExOnye njikwa nke Regulatory Compliance / FAA Bill Williams na Boeing'Director nke Injinia maka Nkwado Ndị Ahịa Sergio Bustamante.
Onyinye a na-ahụ maka nri na akụ na-ahụ maka ndị gosipụtara ọrụ pụtara ìhè na rụzuru na ngalaba injinia ma ọ bụ ndozi n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa. A na-enye onyinye ndị a taa n’oge Nnọkọ Izu Ofeji nke MRO America.
Williams abụwo onye otu ndị otu QA na FedEx maka ihe karịrị afọ 20, na-arụ ọrụ dị ka onye njikwa maka nyocha na ebe nrụzigharị dị arọ na onye njikwa nke Airworthiness Directive Control Group (ADCG). Ọ malitere ọrụ ya na US Air Force dị ka onye na-anya ụgbọelu jet, wee mechaa kwaga Cessna Aircraft, America West Airlines na Saudi Arabian Airlines. Bill abụwo onye edemede mbụ na-enye aka na ọtụtụ FAA Advisory Circulars ma bụrụ onye otu Kọmitii Na-ahụ Maka Ọchịchị Na-ahụ Maka Njikwa Ọdụ ụgbọelu gụnyere ọtụtụ ihe omume dị mkpa.
Bustamante mere akara ya mgbe, na ọrụ ọhụụ dị ka Fleet Chief maka ụgbọ mmiri B737, e zigara ụlọ ọrụ ụgbọelu ụwa na ebili mmiri na-awụ akpata oyi karịrị ihe mberede 737 MAX abụọ. Usoro nkwukọrịta nke ndị ọrụ ụwa, ọ duru ọtụtụ nzukọ na ụgbọ elu na-enwe ọhụụ na ozi ọhụụ emelitere. Iduzi ya n'ọchịchị bụ ihe n exemomi, na-ahapụghị iwebata mkparịta ụka mkparịta ụka na-adabaghị adaba n'echiche Boeing ma na-akwụwa aka ọtọ ma na-ekwu okwu n'ezoghị ezo. O nwetara ndị ọgbọ nke ụwa dum n'oge ihe omume otu oge na ndụ.